Banyere Onye malitere
Akụkọ Onye malitere
Mgbe m bụ nwata, ikiri ụkwụ dị elu na-arọ m nrọ. Mgbe ọ bụla na-eyi akwa akpụkpọ ụkwụ na-adịghị mma nke mama m, enwere m mmasị mgbe niile ịmalite ngwa ngwa, naanị n'ụzọ dị otú a, enwere m ike iyi akwa akpụkpọ ụkwụ dị elu ma dị mma, na etemeete m na uwe mara mma, nke ahụ bụ ihe m chere ka m na-etolite.
Onye kwuru na ọ bụ akụkọ ihe mere eme jọgburu onwe ya nke ikiri ụkwụ, ndị ọzọ kwuru na agbamakwụkwọ ọ bụla bụ ebe egwuregwu maka ikiri ụkwụ dị elu.Ọ masịrị m ihe atụ nke ikpeazụ.
Nwatakịrị nwanyị ahụ, bụ onye chere na inwe ike iyi otu ikiri ụkwụ na-acha ọbara ọbara n'ememe ọbịbịa nke afọ ya, na-enwe agụụ agụụ, tụgharịa, gburugburu, gburugburu. Mgbe ọ dị afọ 16, ọ mụtara ka esi eyi akwa ikiri ụkwụ. Mgbe ọ dị afọ 18, ọ zutere ezigbo nwoke. Mgbe 20, na agbamakwụkwọ ya, gịnị bụ asọmpi ikpeazụ ọ chọrọ ịbanye. Ma ọ gwara onwe ya na nwa agbọghọ na-eyi akwa ikiri ụkwụ aghaghị ịmụta ịmụmụ ọnụ ọchị na gọzie.
Ọ nọ n'ala nke abụọ, ma ikiri ụkwụ ya dị elu hapụrụ n'ala mbụ. Wepụ ikiri ụkwụ dị elu ma nwee nnwere onwe nke oge a.N'ụtụtụ echi ọ ga-eyiri ikiri ụkwụ ọhụrụ ya wee malite akụkọ ọhụrụ. Ọ bụghị maka ya, naanị maka onwe ya.
Ọ na-amasịkarị akpụkpọ ụkwụ, karịsịa akwa ikiri ụkwụ.Uwe ahụ nwere ike imesapụ aka, ndị mmadụ ga-ekwukwa na ọ mara mma. Ọzọkwa uwe nwere ike kechie, ndị mmadụ ga-ekwukwa na ọ bụ sexy.Ma akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ịdị mma, ọ bụghị naanị na ọ dị mma, kamakwa na-enye afọ ojuju.Nke a bụ ụdị ịma mma nke dị jụụ, yana nwanyị miri emi narcissism.Dị ka a na-akwado slipper iko maka Cinderella.Nwanyị na-achọ ọdịmma onwe ya naanị na onye nzuzu enweghị ike iyi ya ọbụlagodi na ebipụrụ mkpịsị ụkwụ ya.Nri dị otú ahụ bụ naanị maka ịdị ọcha na ịdị jụụ nke mkpụrụ obi.
O kwenyere na n'oge a, ụmụ nwanyị nwere ike ịka njọ.Dịka o siri yipụ ikiri ụkwụ dị elu n'oge ahụ, yikwasịkwa ikiri ụkwụ dị elu ọhụrụ.Ọ na-atụ anya na a ga-enye ọtụtụ ụmụ nwanyị ike site n'itinye ụkwụ n'ikiri ụkwụ na-enweghị nkwụsị na nke dabara adaba.
Ọ malitere ịmụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị, guzobe otu R & D nke ya, ma guzobe ụdị akpụkpọ ụkwụ nwere onwe ya na 1998. O lekwasịrị anya n'ịchọpụta otú e si eme akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị dị mma na ejiji.Ọ chọrọ ịkwụsị usoro ahụ na naanị imegharị ihe niile.Mmasị ya na ilekwasị anya na ụlọ ọrụ ahụ emeela ka ọ nwee ọganihu dị ukwuu n'ọhịa nke ejiji ejiji na China.Nhazi mbụ ya na nke a na-atụghị anya ya, jikọtara ya na ọhụụ ya pụrụ iche na nkà ịkwa akwa, ewerewo akara ahụ gaa n'ebe dị elu. Site na 2016 ruo 2018, e depụtara akara ahụ na ndepụta ejiji dị iche iche, ma soro na nhazi oge nke Fashion Week.N'August 2019, ika ahụ meriri aha akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị kachasị emetụta na Eshia.
N'ajụjụ ọnụ a na-adịbeghị anya, a jụrụ onye nrụpụta ka ọ kọwaa mkpali imewe ya n'okwu.Ọ laghị azụ n'idepụta isi ihe ole na ole: egwu, nnọkọ oriri na ọṅụṅụ, ihe ndị na-adọrọ mmasị, gbasasịrị, nri ụtụtụ, na ụmụ m ndị inyom.
Akpụkpọ ụkwụ dị sexy, nke nwere ike ịja mma ọmarịcha usoro nke ụmụ ehi gị, mana tere aka na enweghị isi nke bras.Ejila kpuru ìsì kwuo na ụmụ nwanyị nwere naanị ara sexy.Noble sexy sitere na aghụghọ, dị ka ikiri ụkwụ dị elu.Ma echere m na ụkwụ dị mkpa karịa ihu, ọ dịkwa ike, ya mere, ka anyị onwe anyị ndị inyom yi akpụkpọ ụkwụ kachasị amasị anyị gaa eluigwe na nrọ anyị.